Ny lalao mihetsika 25 tsara indrindra ho an'ny Android | Androidsis
Ignacio Sala | 11/07/2021 12:00 | Lalao Android
Mba lalao iray heverina ho tsara dia tsy maintsy manome mekanika tsotra sy mora ampiasaina ary tsy manery antsika hamaky izany fehintsoratra lava amin'ny andinin-tsoratra, farafaharatsiny raha ny zavatra tadiavintsika dia lalao fihetsika, izay ahafahantsika mivoaka mandritra ny minitra vitsy ary miroso amin'ny zavatra hafa.
Ao amin'ny Play Store dia azontsika atao ny manana kilalao marobe isan-karazany, miaraka amin'ny hetsika ho be indrindra. Raha mitady lalao hetsika hiaraha-mikorana na andro lava amin'ny finday finday Android na takelakao ianao dia hampiseho aminao ny tsara indrindra lalao hetsika ho an'ny Android.
4 Ny mandeha Zombie 2: Zombie Shooter
5 Maty nahatonga an'ilay bibidia 2
7 Major Maymen 2: fitifirana sy hetsika
11 Afo maimaimpoana Garena
12 Space Marshals 2 sy 3
15 Fomba Genshin
16 Nova Lova
17 Fitaovana finday mainty
19 Asphalt 9: Legends
21 Ady lehibe 2 - Ady ady
22 Fehezan-teny 2
23 Ops maoderina
24 Guns ny Boom
Raha tianao ny lalao sy sehatra fanaovana hetsika, dia tokony tsy hitsahatra ny manandrana ny Blackmoor 2, karazana lohateny sehatry ny fiaraha-miasa beat-em-up, izay tsy maintsy handresentsika ny fahavalontsika mifototra amin'ny kapoka sy ny fahaiza-manaon'ny litera tsirairay.
Ny iray amin'ireo teboka tsara amin'ity lohateny ity dia izy Multiplayer miara-miasa amin'ny fotoana tena izy, mamela antsika hiady hatramin'ny mpilalao 4 an-tserasera. Blackmoor 2 dia azo alaina maimaim-poana, misy doka sy fividianana ao anaty app.
Developer: Efatra efatra voafetra
Zombie Catcher dia lalao Action-Adventure izay mitranga ao a izao tontolo izao izay notafihan'ny tsy maty. Namono ny planeta Tany ireo tsy maty, saingy noho i AJ sy Bud, mpandraharaha roa mpiray dina izay manambatra hery, dia hosamborin'izy ireo daholo ny zombie hiaro ny Tany.
Ity lalao ity dia ao anatin'ny fizarana Safidin'ny mpanitsy avy amin'ny Play Store, noho izany isika dia hahita lohanteny mahafinaritra ao amin'ny Zombie Catcher, lohateny azontsika alaina maimaimpoana, ahitana doka sy fividianana ao anatin'ny fampiharana.
Zombie Catcher 🧟 Mihaza sy mamono ny maty
Developer: Lalao Deca
PUBG dia tena a kilasika amin'ny lalao battle royale, karazana lalao iray ahafahan'ny mpilalao 100 miantsona amin'ny nosy iray, tsy maintsy mitady fitaovam-piadiana ary mamono ny fahavalo rehetra. Na dia efa voasaron'ny lohateny vaovao hafa aza ny kinova PC, toa ny Warzone na Apex, ao amin'ny ekosistema finday dia mbola mpanjaka ihany io.
Misy PUBG Mobile ho anao misintona maimaim-poana. Ireo fividianana natolotry ny rindrambaiko dia tsy manome afa-tsy lafiny hatsarana sy fitaovam-piadiana izay tsy tafiditra ao anatin'ny fahaizan'ny mpilalao mihitsy.
MOBILE PUBG: NY FITONDRANA
Ny mandeha Zombie 2: Zombie Shooter
Ao ambadik'io anarana voalohany io dia mahita a mpitifitra izay tsy maintsy hamonoantsika ny zombies ankavia sy tsara raha manao iraka hahazoana loharanom-pahalalana isika, mampitombo ny fahaizantsika ary mahazo tombony izay hahatonga antsika ho matanjaka kokoa amin'ny fanoherana ny zombie.
Ny Walking Zombie 2 dia misy ho anao misintona maimaim-poana, misy doka sy fividianana fampiharana.
The Walking Zombie 2: Tahotra zombie
Developer: Lalao Alda
Klasika iray hafa, raha miresaka momba ny zombies isika dia Dead Trigger 2, lohateny izay viriosy mahafaty no nihanaka erak'izao tontolo izao ary izany dia miteraka fiovan'ny olombelona, ​​ka mahatonga ny zanak'olombelona ho faty.
Dead Trigger 2 dia lalao mitifitra olona voalohany izay mametraka eo am-pelatanantsika fitaovam-piadiana marobe isan-karazany hampiatoana ny andiana zombie mandrahona ny fisiantsika. Dead Trigger 2 dia azo sintonina maimaimpoana maimaimpoana, ao anatin'izany ny doka sy ny fividianana ao anaty app.
MATY TRIGGER 2 - Zombie Survival Shooter
Developer: Lalao MADFINGER
Ny franchise Call of Duty dia niantsona tamin'ny fitaovana finday roa taona lasa izay, miaraka amina lohateny hoe, ankoatra ny maody battle royale, dia manome antsika ny sari-tany mahazatra amin'ity franchise ity izay tsy maintsy hiatrehantsika ny fahavalo amin'ny vondrona 5 ka hatramin'ny 5.
Call of Duty: finday dia misy ho anao misintona maimaim-poana. Ireo fividianana natolotry ny rindrambaiko dia tsy manome afa-tsy lafiny hatsarana sy fitaovam-piadiana izay tsy tafiditra ao anatin'ny fahaizan'ny mpilalao mihitsy.
Call of Duty®: Finday - ELITE OF ELITE
Major Maymen 2: fitifirana sy hetsika
Lohateny izay, ho an'ny estetika, mampatsiahy antsika ny franchise Metal Slug Major Maymen 2, anaram-boninahitra feno hatezerana sy feno fihetsiketsehana izay tsy maintsy hamonoantsika ny fahavalontsika amin'ny basy poleta, basy, snipers, basim-borona, bazookas… mba hamonjy an'izao tontolo izao ary, ny malalan'ilay mahery fo.
Major Maymen 2 dia misy ho anao misintona maimaim-poana, misy doka sy fividianana lalao. Tsy mitaky internet ny hankafizanao ny lalao, noho izany dia mety raha rehefa manao dia lavitra isika fa tsy ny fifandraisana amin'ny Internet dia mety ho lafo vidy.
Major Mayhem 2: fitifirana sy hetsika
Developer: Lalao hitsambikina amin'ny balafomanga
Shadow Fight 2 afangaro ny anjara asa mitovy sy ny ady kilasika. Amin'ity lalao ity dia afaka mampita ny toetrantsika amin'ny fitaovam-piadiana mahery vaika sy fiadiana tsy mahazatra izahay ary koa teknika haiady haiady izay hamonoana ny fahavalontsika.
Mandehana mamakivaky tontolo enina samihafa feno demonia mandrahona amin'ity lalao milalao andraikitra ity ary ny ady izay hametraka ny adrenalinanao ho arivo, izay azonay atao misintona maimaim-poana, misy doka sy fividianana lalao.
Developer: Nekki - Lalao sy lalao ady
Na dia tsy misy intsony aza izany ao amin'ny Play Store, tsy afaka mijanona miresaka momba ny Fortnite izahay, iray amin'ireo lalao miaraka amin'ny PUBG nampalaza ny maody lalao royale an'ady. Na dia mety iray amin'ireo teboka ratsy aza ny fananganana, raha mampihatra kely ianao dia tsy ilaina ny mamorona Taj Mahal hiaro tena amin'ny fahavalonao.
Fortnite dia misy ho anao misintona maimaim-poana amin'ny alalan'ny Tranonkala Epic Games. Ireo fividianana natolotry ny fampiharana dia tsy manome afa-tsy lafiny hatsarana sy fitaovam-piadiana izay tsy tafiditra ao anatin'ny fahaizan'ny mpilalao mihitsy.
Ao amin'ny Swamp Attack dia mila Arovy amin'ny tranobe misy anay ny tranonay amin'ireo biby lasa adala ary manafika antsika. Mametraka am-pelatanantsika mihoatra ny 300 ny haavony ary misy maody multiplayer. Mba hiarovan-tena amin'ny fanafihana dia manana karazana fitaovam-piadiana mihoatra ny faha-3 isika, manomboka amin'ny basim-borona ka hatrany amin'ny mpandefa grenady.
Azo ampiasaina ity lohateny ity ho anao misintona maimaim-poana, misy doka sy fividianana fampiharana.
Developer: Outfit7 voafetra
Garena Free Fire dia manolotra antsika ny battle royale mode, fa tsy toy ny PUBG sy Fortnite, ny lalao dia manana faharetana 10 minitra izay tsy maintsy hamonoantsika ireo mpilalao 49 izay niara-nianjera tamintsika tany amin'ny nosy lavitra iray.
Misy afo maimaim-poana ho anao misintona maimaim-poana. Ireo fividianana natolotry ny rindrambaiko dia tsy manome afa-tsy lafiny hatsarana sy fitaovam-piadiana izay tsy tafiditra ao anatin'ny fahaizan'ny mpilalao mihitsy.
Afo malaso Garena: tsingerintaona faha-4
Space Marshals 2 sy 3
Ao amin'ny Space Marshals dia mahita anaram-boninahitra miaraka aminay fomba fijery isometrika izay tsy maintsy handresentsika ny fahavalontsika eo am-panatanterahana iraka, ary aiza no tsy maintsy hanehoantsika ny fahaizantsika miady, ny halavirantsika ary ny fahaizantsika mamantatra.
Space Marshals 2 sy Space Marshals 3 dia afaka maimaimpoana, misy doka sy fividianana fampiharana. Raha manana Google Play Pass ianao dia afaka mankafy an'ity lohateny ity maimaimpoana nefa tsy doka na fividianana.
Rantsanana eny amin'ny habakabaka 3
Ny franchise Rayman dia mametraka eo am-pelatanantsika isa marobe lohateny napetraka platformer hetsika, izay tsy maintsy anehoantsika ny fahaizantsika mifehy ny toetra amam-panahy, franchise manana 30 taona mahery eny an-tsena ary manolotra anaram-boninahitra 3 samihafa izahay ao amin'ny Play Store, na dia Rayman Adventures ihany aza no azo alaina maimaimpoana.
Any Gimvalor dia tsy maintsy atao izany miadia amin'ny lalan'ny maizina ary mandresy ny fahavalo amin'ny traikefa nahafinaritra RPG. Ny fihetsika voalohany amin'ity lohateny ity dia azo jerena maimaim-poana ary raha te hiditra amin'ny ambiny dia tsy maintsy ampiasaintsika ny fividianana izay manokatra ny ambin'ny lohateny.
Grimvalor dia afaka maimaimpoana, misy doka sy fividianana fampiharana. Raha manana Google Play Pass ianao dia afaka mankafy an'ity lohateny ity maimaimpoana nefa tsy doka na fividianana.
Iray amin'ireo lohateny fihetsika farany nahatratra ny Play Store tamin'ny taona lasa ka lasa malaza dia ny Genshin Impact, lohateny izay mitondra antsika any amin'ny tontolo mahafinaritra feno traikefa nahafinaritra izay azo alaina maimaim-poana koa, na ho an'ny PC na ho an'ny console.
Raha tianao ny siansa sy ny science fiction mpitifitra voalohany, tokony hanome fotoana NOVA Legacy ianao, lohateny mifototra amin'ny saga NOVA. Amin'ity lohateny ity dia nametraka ny tenanay ho eo amin'ny kiraron'i Kal Wardin izahay, miaramila an-dranomasina NOVA tranainy izay nantsoina tamina rakitra hampiasana ny fiadiany miady amin'ny ivelany. an'ny fitantanana kolonialy.
NOVA Legacy dia misy ho anao misintona maimaim-poana, misy doka sy fividianana fampiharana.
Fitaovana finday mainty
Raha tianao ny lalao milalao andraikitra, mila manandrana ianao Black Desert Mobile, izay hetsika iray amin'ireo zavatra manintona azy indrindra fitsapana ny fahaizantsika amin'ny karazan-toetra rehetra, na amin'ny ady, toy ny fiompiana omby, fihazana, fanjonoana ...
Black Desert Mobile dia misy ho anao misintona maimaim-poana ary misy fividianana fampiharana.
Raha tianao ny lalao fitifirana tany am-boalohany dia tokony hanandrana i Johnny Triger a lalao stickman izay tsy misy farany ny hetsika ary ny tanjonay dia ny handrava ny tontolon'ny mafia ambanin'ny tany rehefa mitsambikina, mihazakazaka, mihodina, mikorisa ary manatitra bala havia sy havanana.
Johnny Triger dia misy ho anao misintona maimaim-poana, misy doka sy fividianana fampiharana.
Johnny Trigger - Lalao mitifitra
Ny franchise Asphalt dia tsy tokony ho diso amin'ity fanatontosana ny lalao hetsika tsara indrindra ity. Asphalt 9: Legends no lohateny farany amin'ity franchise ity ho an'ny finday, izay azontsika atao mitondra fiara ny fiara haingana sy lafo indrindra eto an-tany raha mifaninana amin'ireo mpilalao hafa isika.
Asphalt9: misy angano ho anao misintona maimaim-poana ary misy doka sy fividianana fampiharana.
Raha miresaka fiara sy lohatenin'ny hetsika isika, dia tsy afaka diso manonona ny Carmageddon mahazatra, lohateny iray aza mety amin'ny mpihaino rehetra izay tokony handresentsika ny fahavalontsika na dia mihazakazaka olona betsaka araka izay tratra aza isika. Ny dikan'ity lalao ho an'ny Android ity dia tsy mitovy amin'ny lohateny nampalaza ny saga tamin'ny faramparan'ny taona 90.
Ady lehibe 2 - Ady ady
Ny lalao shooter olona voalohany mahaliana dia hita ao amin'ny Ady lehibe 2, lalao iray, araka ny anarany, mitranga amin'ny ady lehibe faharoa izay misy maodin-dalao maromaro izay amina seho 5 samihafa, ahitana maody multiplayer 6 ary ahafahantsika misafidy ny banky manelanelana an'i Alemana, Etazonia, Japon ary Russia.
Misy ny Ady lehibe 2 ho anao misintona maimaim-poana, misy doka sy fividianana fampiharana.
Ady lehibe 2 - Ady ady (Lalao basy)
Developer: Lalao Edkon GmbH
Azonao atao ny milaza fa Standoff no iray Counter Strike ho an'ny finday, lalao iray izay manome antsika mekanika mitovy amin'ity shooter klasika ity miaraka amin'ny sari-tany vaovao, karazana fitaovam-piadiana vaovao ary fomba lalao hafa izay iadanan'ireo mpampihorohoro ny hery manokana.
Standoff 2 dia azo alaina ho an'ny misintona maimaim-poana, misy doka sy fividianana fampiharana.
Lohateny hafa manana aingam-panahy avy amin'ny Counter Strike dia Modern Ops, lalao marobe amin'ny olona voalohany izay ananantsika mihoatra ny 30 fitaovam-piadiana sy camouflage, lalao 5 manohitra 5, ary ny hany tanjontsika dia ny mamarana ny fahavalo alohan'ny ataony.
Ops maoderina dia misy ho anao misintona maimaim-poana, misy doka sy fividianana fampiharana.
Ops maoderina: Lalao basy - Ady FPS an-tserasera
Guns ny Boom
Lohateny hafa mitovy amin'ny Moderns Ops sy Standoff 2 nahazo tsindrimandry avy amin'ny Counter Strike dia Guns of Boom, lalao eo anelanelan'ny vondrona 4 amin'ny 4 miady ary ekipa iray ihany no afaka mijanona, izay ilay mandresy amin'ny lalao. Tsy toy ny Counter Strike, ny endri-tsoratra hita ao amin'ny Guns of Boom dia manana fahaiza-manao samihafa izay azontsika araraotina hahazoana ny fahavalontsika.
Guns of Boom dia misy ho anao misintona maimaim-poana, misy doka sy fividianana lalao.
Guns of Boom - hetsika PvP an-tserasera
Developer: Lalao Game
Shadow Fight Arena dia a Lalao mpiady 3D mpilalao 2 miaraka amina sary mihetsika mahavariana. Manolotra antsika ihany koa ny fahafaha-mankafy ady marobe amin'ny ady amin'ny olon-kafa na amin'ny faharanitan-tsaina artifisialin'ny lalao.
Azo ampiasaina ity lohateny ity ho anao misintona maimaim-poana, ahitana doka sy fividianana lalao, ary iray amin'ireo lalao Play Store tafiditra ao amin'ny sokajy Safidin'ny Mpamoaka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ny lalao hetsika 25 tsara indrindra ho an'ny Android